M na-ekwupụtara m, m a keyboard shortcut junkie. Ihe ọ bụla m nwere ike ime iji nyere m dezie ngwa ngwa bụ ezi ihe; na ihe ọ bụla na-ekwu "ọsọ" dị ka keyboard mkpirisi ụzọ. E nwere ihe karịrị 600 menu nhọrọ na-FCP X, na narị keyboard mkpirisi ụzọ. Ma, ndị na-kasị mma?
Ke ibuotikọ emi, m na-agwa m Top 40 keyboard mkpirisi ụzọ. M na-eji ndị a beauties ụbọchị ọ bụla nyere m aka ga-esi m oru ngo mere ngwa ngwa. Ugbu a, ị nwere ike iji ha, kwa. Omume mma, m na-categorized ha ka ha ndị a mfe ịchọta.
(Ma, n'ihi na ndị na-ewepụta oge iji gụọ, ị ga-achọpụta na a na ndepụta n'ezie na-agụnye 53 keyboard Ụzọ mkpirisi. Ma na-eji "Top 40" na aha yiri nke ukwuu sexier karịa "Top 53.")
Nhọrọ + N
Mepụta ọhụrụ Omume
Mepụta ọhụrụ Project
Ịgbanwee + Cmd + D
Mepụta a Project snapshot
Cmd + [ọzọ]
Mbugharị n'ime usoro iheomume ma ọ bụ oyiyi
Cmd + [mwepu]
Mbugharị nke usoro iheomume ma ọ bụ oyiyi
Mgbanwe + Z
Size na usoro iheomume ma ọ bụ oyiyi dabara na window
Toggle Library na Nchọgharị ngosi ma ọ bụ gbanyụọ
Toggle Omume onyenlereanya emeghe / emechi
Laa azu - Kwụsị - Play playhead (enweta otutu ugboro ịgbanwe ọsọ)
Toggle skimming ma ọ bụ gbanyụọ
Toggle snapping ma ọ bụ gbanyụọ
Toggle clip visibiliti ma ọ bụ gbanyụọ
Toggle skimmer Ama na-egosipụta na / anya na Nchọgharị
Toggle soja emeghe / emechi
Toggle mmetụta Nchọgharị emeghe / emechi
Toggle Agba Board emeghe / emechi
Toggle video akporo igosi na / anya
Nịm Na na ọnọdụ nke skimmer / playhead
Mgbanwe + m
Na-awụlikwa elu na playhead ka Na
Nhọrọ + m
Nịm si na ọnọdụ nke skimmer / playhead
Ịgbanwee + O
Na-awụlikwa elu na playhead ka Ọ
Nhọrọ + O
Nhọrọ + X
Hichapụ ma ndị na na Ọ
Tinye a welara
Tinye a welara na-emeghe edit welara dialog
Igosi ihe gbakwunyere edit
Igosi ihe Fanye edit
Igosi ihe overwrite edit
Igosi a Jikọrọ edit
Ịgbanwee + G
Mepụta a ejikọrọ storyline
Ịgbanwee + 1
Dezie ọdịyo na video ka usoro iheomume
Ịgbanwee + 2
Dezie video-nanị na usoro iheomume
Ịgbanwee + 3
Dezie audio-na-na-na usoro iheomume
Nhọrọ + W
Fanye a ezin ọnọdụ nke skimmer / playhead
Ịmụbawanye / daa audio si synced video
Nhọrọ + Control + S
Ịmụbawanye / daa audio components (multitrack audio)
Ịgbanwee + Cmd + F
Play oru ngo ihuenyo zuru (ESC laghachi)
Play sekọnd ole na ole tupu mgbe skimmer / playhead ọnọdụ
Họrọ Arrow (nhọrọ) ngwá ọrụ
Họrọ Kpaa ngwá ọrụ
Họrọ Position ngwá ọrụ
Họrọ Agụba ngwá ọrụ
Họrọ iche ngwá ọrụ
Ịgbanwee + X
Na-awụlikwa elu họrọ Dezie mgbe ọnọdụ nke skimmer / playhead
[Rikoma] / [oge]
Bugharịa họrọ clip ma ọ bụ dezie mgbe otu etiti hapụrụ / nri
Ịgbanwee + [rikoma] / Mgbanwe + [oge]
Bugharịa họrọ clip ma ọ bụ dezie ebe iri okpokolo agba hapụrụ / nri
Ndị ọzọ jụụ Ụzọ mkpirisi
Tinye ndabere zuru-ihuenyo aha
Ịgbanwee + Control + T
Tinye ndabere ala-na-atọ aha
Export nna ukwu faịlụ nke oru ngo
> Resource> FCP> Top 40 Keyboard Uzo mkpirisi maka Final Cut Pro X